Horjoogayaasha Al-Shabaab oo baxsad ka ah howlagallada Cirka – Radio Muqdisho
Saraakiisha Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa shaaca ka qaaday in Malleeshiyada Al-Shabaab iyo horjoogayaashii ka sarreeyayba ay ku jiraan xaalad firxad ah, ka dib markii ay u adkaysan waayeen duqeynmaha xagga Cirka iyo weerarrada ay Ciidamada xoogga ku baacsanayaan.
Taliyaha qaybta 43aad ee Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed Janaraal: Isamaaciil Saxardiid ayaa jariiradda Daily Nation ee kasoo baxda Dalka Kenya u sheegay in ay Horjoogayaasha ugu sarreeysa Al-Shabaab iyo Malleeshiyaadkoodiiba ka carareen goobihii ay Ku dhuumaalaysan jireen.
Mr; Saxardiid ayaa intaa raaciyaya inay xogtaasi ka heleen dagaallamayaal badan oo iyaga isu soo dhiibay, kuwaasoo ka war bixiyay baqdinta lasoo gudboonaatay hoggaanka Kooxda iyo Malleeshiyadooda.
Hoggaamiyaha ugu sarreeya Al-shabaab Axmed Diiriye iyo horjooge lagu magacaabo Axmed Cumar ayaa ka mid ah saraakiil la sheegay inay ka carareen Magaalada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, markii ay duqeymo xooggan ka dhaceen degaanno ku dhow Jilib.
Kooxda Al-shabaab ayaa sidoo kale banneeysay degaanno badan oo ku yaalla Gobolka Gedo, halkaasoo inta badan ay ka abaabuli jireen weerarrada ay ka geystaan qaybo ka mid ah Gobolka Waqooyi bari Kenya.
Dowladda Shiinaha oo Falastiin u Aqoonsanaysa Dowlad Madax bannaan